वीरगन्जका मेयरविरुद्ध विद्यार्थीहरुद्वारा नाराबाजी
वीरगन्ज, ८ पुस । श्री माईस्थान विद्यापीठ मा.वि. का प्रधानाध्यापक विनोद मेहताको वीरगंज महानगरपालिकाले सरुवाका लागि पत्राचार गरेपछि विरोध प्रदर्शन भएको छ ।
फोरम र राजपाले मधेशको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन : तमरा अभियान
रौतहट, ७ पुस । जयप्रकाश गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मधेशको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्ष दाबी गरेको छ ।
सीके राउतका समर्थकहरुद्वारा कतारमा फोरमका सांसद अरगरिया सम्मानित
काठमाडौं, ७ पुस । वैदेशिक रोजगारका लागि कतारमा रहेका मधेशका युवाहरुद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता उमाशंकर अरगरिया सम्मानित भएका छन् ।
रौतहट, ७ पुस । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं संघीय सरकारका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन नभए पुनः आन्दोलन जाने चेतावनी दिएका छन् ।
‘लुम्बिनी एक्स्पो सुरु : १० लाखले अबलोकन र ४० करोडको कारोबार हुने अपेक्षा
चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, ६ पुस । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वेला–बेला हुने यस्ता महोत्सवले उद्यमशिलताको विकासगर्ने बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा फोरमको प्रशिक्षण
कैलाली, ५ पुस । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा दुई दिने अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलालीको अत्तरियामा सम्पन्न भएको छ ।
छोरासरह छोरीलाई सम्मान दिनु पर्छ : नायिका थापा
रौतहट, ४ पुस । गौर नगरपालिका वडा नंबर १ को वडा कार्यालयद्वारा संचालित निःशुल्क ३ महीने कम्प्यूटर तालिम सम्पन्न भएको छ ।
फोरम नेपालको प्रदेश ३ अध्यक्षमा तामाङ
काठमाडौं, ४ पुस । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको प्रदेश नंं ३ को अध्यक्षमा लालबहादुर तामाङ चयन भएका छन् ।
वीरगन्ज भन्सारबाट सवारीसाधनमा आवतजावत नगर्न सूचना जारी
वीरगञ्ज, ४ पुस । देशकै प्रमुख नाका वीरगञ्ज भन्सारबाट सवारीसाधनमा आवातजावत नगर्न वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।
डा. सि के राउतलाई पुर्पक्ष गर्नुको कारण उच्च अदालतद्वारा माग
काठमाडौं, ३ पुस । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सिके राउतलाई के कारणले पुर्पक्ष गरिएको छ भनि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थाई ईजलाश वीरगंजले सक्कल मिसिल १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउन जिल्ला अदालत रौतहटसँग माग गरेको छ ।
काठमाडौं, ३ पुस । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्ष र सीपयुक्त कामदारको परिश्रमबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश २ का मन्त्रीद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेश भ्रमण
धनगढी, ३ पुस । अन्तर प्रदेश भ्रमणको क्रममा प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव र राज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहसहितको टोली
बलानविहुलमा राजपाको सदस्यता वितरण
सप्तरी, ३ पुस । सप्तरीको सिमावर्ती बलान बिहुल गाउँपालिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सदस्यता वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् ।
राजपानिकट विद्यार्थीहरुले उपकुलपतिलाई बुझाए ज्ञापन
जनकपुरधाम, २ पुस । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालनिकट राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
राजपाका विद्यार्थीहरुले क्याम्पस प्रमुखलाई कालोमोसो दली कार्यकक्षमै थुने
जनकपुरधाम, १ पुस । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निकट विद्यार्थीहरुले जनकपुरधामस्थित श्री रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस (राराब क्याम्पस)का प्रमुखलाई कालोमोसो दलेका छन् ।
सरकार सही बाटोमा हिडेको छ : प्रम ओली
काठमाडौं, १ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सही बाटोमा हिंडिरहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं, २९ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्र्रेसको महासमिति बैठक शुरु भएको छ ।
विवेकले हतियार बुझायो
विराटनगर, २८ मंसिर । अखिल जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा विवेक समूहले सरकारी वार्ता टोलीलाई तीन थान पेस्तोल बुझाएको छ ।